Manchester United oo diyaar garoow u gashay Antoine Griezmann | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Manchester United oo diyaar garoow u gashay Antoine Griezmann
Published on November 20, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(20-11-2017) Manchester United ayaa bartilmaameedka ugu weyn ka dhigan doonta weeraryahanka Atletico Madrid ee Antoine Griezmann marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoygu badhtamaha sannadka dambe.
Manchester ayaa u dhaqaaqi doonta inay hesho Antoine Griezmann marka ay dhamaato xayiraadda naadiga reer Spain laga saaray iibka ciyaartoyga kaas oo ku eg bisha January, hase yeeshee, waxay sugi doonaan illaa badhtamaha sannadka dambe inay dalabkooda u gudbiyaan.
Warbaahinta dalka Spain ayaa waxay qoreen in Manchester United ay dejisay qorshe ay hal mar kusoo wada xero gelinayso Gareth Bale iyo Griezmann, inkastoo warar kalena sheegayaan in haddii uu Bale tago ay ka hadhi doonto Griezmann.
Griezmann ayaa la aaminsan yahay inuu ka tegi doono naadigiisa Atletico Madrid, iyadoo taageereyaashu ku qayliyeen dhawrkii ciyaarood ee ugu dambeeyey, gaar ahaan kulankii Real Madrid ee barbar dhaca ku dhamaaday, kaas oo ay iskugu darsameen cayda taageereyaasha iyo tababare Simeone oo beddelay.
Antoine Griezmann ayaa ku jira xaaladdii ugu xumayd ee gool dhalinta la’aanta tan iyo sannadkii 2014.